Hillcrest Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Hillcrest
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Hillcrest
Isekelwe maphakathi ne-Hillcrest, i-Tennis Court Cottage iyindawo yokudlela esanda kulungiswa, esesakhiweni esivikeleke kahle engadini eluhlaza okotshani. Indawo iyindawo yangasese nokuthula, enawo wonke amasevisi adingwa yibhizinisi noma isihambi sokuzilibazisa. Ukuzingenela nokuphuma kuyashesha futhi kulula ngekhiphedi esangweni eliyinhloko, ibhokisi lesikhiye lisendaweni yokungena endlini. Ngenxa yobukhulu bayo, iyunithi ifanelekela ukuhlala kwesikhathi esifushane.
Amasevisi athandwayo ase- Hillcrest ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Hillcrest
Indlwana Entofontofo e-Hillcrest
Weaver - studio enhle nge ukubukwa esigodini
Hadeda- New apartment with incredible views!
Gcwalisa kabusha Indawo